Homeလေလံပွဲလေလံရလဒ်များကိုတူရကီ-Kayseri လိုင်း Culvert အဆိုပါဖေရက်၏အနက် Grout Coating လေလံရလဒ်မှာတွေ့ရှိ
17 / 09 / 2019 Levent Elmastaş လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ 0
တင်ဒါရလဒ်လုပ်တူရကီ kayser လိုင်း mortared pera အပေါ်ယံပိုင်းအတွက် orifices အတွက်
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး2။ ဒေသဆိုင်ရာပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှု (TCDD) 2019 / 386337 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 903.112,88 TL နှင့်တူရကီ-Kayseri Hatt နှုန်း 1.337.861,39 အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွေ့ Culvert အင်္ဂတေသည်ဖေရက်၏အနက် Coating အလုပ်နူးညံ့ 25 ကုမ္ပဏီများမှလေလံဆွဲထားပြီးဖြင့်အတိအကျမသိရသေးရလဒ်များကိုစာချုပ်ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်အတွက်
908.445,00 လေလံ£ bezirgan တည်ဆောက်နေ TAAH ။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ , LTD ။ STI ။ ဒါဟာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နုလေလံပါဝင် 8 ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။
နူးညံ့သော, မော်တာ (7909 dz) mxnumx230 စင်တီမီတာအထူ (ကျောက်ခဲနှင့်မီးဖို) (။ ဘိလပ်မြေများနှင့်အားလုံးသင်္ဘောကုန်ကျစရိတ်မျိုးကွဲများအပါအဝင်) pera ဖန်ဆင်းပြီးတော့အခြားအကျင့်သောအကျင့်တို့ပါဝင်သည်။ ပေးပို့အလုပ် 250 (တရာရှစ်ဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှကြာချိန်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီ-Kayseri Hatt Pera ၏ Culvert Grout Coating မှာတွေ့ရှိ 15 / 08 / 2019 အင်္ဂတေသည်အတွက်တူရကီ-Kayseri လိုင်း Culvert STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)2များ၏ဖေရက်၏အနက် Coating TC အထွေထွေဒါရိုက်တာမှာတွေ့ရှိ။ ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် mortared Pera LINE ၏အပေါ်ယံပိုင်းအတွက် orifices အတွက်စီမံခန့်ခွဲရေး SERVICE ကိုတစ်ဝိုက်တူရကီ-Kayseri purchasing အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 386337 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Anadolu Boulevard Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခမှတဆင့်) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3122111449 - 3122111225 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumx.bolgesatinalma@tcdd.gov.t ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်း အင်တာနက်လိပ်စာများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-တင်ဒါဘာသာရပ် ...
slope ၏စကတ်တင်ဒါရလဒ်အတွက်ဖုံးအုပ်ထားသည့်ဖနောင့်နှင့်အဖေရက်၏အနက်အမှတ်တရအကြား Konya-Karaman မြေပေါ် 21 / 09 / 2018 Konya-Karaman မြေပေါ်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား TCDD6၏လျှောစောက်ဒေါက်အဝတ်နှင့်အမှတ်တရကိုဖုံးလွှမ်းစီးပွားရေးဖေရက်၏အနက်လေလံရလဒ်အကြား။ ဒေသဆိုင်ရာယ်ယူခြင်းနှင့် Slope အဝတ်နှင့်ဖေရက်၏အနက်အတွက်အမှတ်တရကတော့ 2018 စီးပွားရေးလေလံဆိုရင် single ဖုံးအုပ်နှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်£ 410626 စာချုပ်အဆိုပြုချက်ကို HALIL ERYILMAZ ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ် Konya-Karaman အင်တာမီလန်မြေပေါ်ဒေါက်နှုန်း 7.573.084,44 အကြောင်းကိုကုန်ကျထားတဲ့ 11.994.383,77 / 57 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 7.588.916,30 TL ၏ Inventory Control ကိုဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှု ဒါဟာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နုလေလံပါဝင် 25 ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ နူးညံ့သောဖေရက်၏အနက်အလုပ်လုပ်မော်တာ၏ဆေးထိုးအတွက် 92.330,00230-250 စင်တီမီတာအထူအကျိုးအပဲ့သောကျောက်ကျောက်မိုင်း mxnumx ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Slope စကတ်အကြား Konya-Karaman မြေပေါ်အတွက်ဒေါက်အမှတ်တရအဖုံးများနှင့် Pera 15 / 08 / 2018 Slope အဝတ်နှင့်ဖေရက်၏အနက် Coating TCDD6အကြားတွင် Konya-Karaman မြေပေါ်အတွက်က Wall ဒေါက်။ အမှတ်တရဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဖုံးအုပ်ထားသည့်တောင်ခြေနှင့်အဖေရက်၏အနက် Slope ဒေါက်အကြားတွင်ဒေသန္တရရုံး Konya-Karaman မြေပေါ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 410626 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Kurtulus ခရိုင် Ataturk ရိပ်သာလမ်း 01120 Seyhan SEYHAN / ADANA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224536914 - 3224575807 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgemudurlugu@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်း အင်တာနက်လိပ်စာများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 6-နူးညံ့သော ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အလှေငြိမ်ထိန်းနံရံများ, တောင်ပံမြို့ရိုး, ဖေရက်၏အနက်အပေါ်ယံပိုင်းအကျင့်ကိုကျင့်အတွက် Culverts နှင့်တံတားများ 04 / 07 / 2019 HAYDARPAŞAတူရကီ LINE Hasanbey - STATE ရထားလမ်းတူရကီအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး (TCDD)2သမ္မတနိုင်ငံအတွင်းမှာစီးပွားရေးတွေလွှမ်းခြုံSİNCANပြင်းထန်ဘူတာရုံ KM ကင်နှင့်တံတားအခြားသတင်းများ LERA IN လှေငြိမ် WALL Holder ထဲမှာနံရံနဲ့ PERA Wing ။ REGION ယ်ယူခြင်းဝန်ဆောင်မှု Manager ကိုHAYDARPAŞAတူရကီ LINE Hasanbey - ကီလိုမီတာ URLs များကိုအမျိုးမျိုးသောSİNCANဘူတာရုံ culverts နှင့်တံတားများ, လှေငြိမ်သိုလှောင်မှုနံရံတောင်ပံနံရံနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ် Pera အပေါ်ယံပိုင်းအပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 19 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 310481 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) နေရပ်လိပ်စာ: ...
Riz-Artvin ပြည်နယ်က Surface ကုသမှုနှင့် Emulsion Coating တင်ဒါ၏ရလဒ်များအတွက်အသုံးပြုရန်ကတ္တရာ emulsions 22 / 01 / 2019 (ဇန်နဝါရီလအတွင်းပိတ်သောကျောက်ထဲကနေကြေမွကြေမွခြင်းနှင့် sieved ကတ္တရာကျောက်စရစ်နှင့်အတူ) Emulsion Artvin ပြည်နယ်ကတ္တရာသုံး (CRS-10) ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အသုံးပြုစေမည်အကြောင်း, Surface က Coating နှင့် Emulsion Coating စီးပွားရေးလေလံအဝေးပြေးလမ်းမကြီး2ဧရိယာ Trabzon အခြားအထူးရလဒ်များ - အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပြည်နယ်၏ 10 ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှင့် Rize အတွက်ပြည်နယ်လမ်းများ Artvin emulsion စီးတီးကတ္တရာသုံး (CRS-2018) ထုတ်လုပ်မှု (ဇန်နဝါရီလဖြစ်ပါသည်ကြေမွနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရထံမှပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ကတ္တရာသုံးကျောက်စရစ် sieved) 494951 တင်ဒါဖို့က Surface Coating နှင့် emulsion Coating စီးပွားရေးအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ - 41.986.073,27 /2JCC အရေအတွက်အဝေးပြေး၏ဘတ်ဂျက် Institution များညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ Rize ရာ 17 TL ခန့်ကုန်ကျ ပူဇော်ရသောကုမ္ပဏီ ...
slope ၏စကတ်တင်ဒါရလဒ်အတွက်ဖုံးအုပ်ထားသည့်ဖနောင့်နှင့်အဖေရက်၏အနက်အမှတ်တရအကြား Konya-Karaman မြေပေါ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အလှေငြိမ်ထိန်းနံရံများ, တောင်ပံမြို့ရိုး, ဖေရက်၏အနက်အပေါ်ယံပိုင်းအကျင့်ကိုကျင့်အတွက် Culverts နှင့်တံတားများ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အကင် coating Pera Yaptırılacaktır (စခန်းများကြားမှာYarbaşı-ဥယျာဉ်)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အမှတ်တရ Holder လှေငြိမ်ကျောက်ရိုးနှင့်ဖေရက်၏အနက်ပန်းကန်Yaptırılacaktır
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (365) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (633) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)